भारतबाट आउने सबैैलाई क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना परीक्षण गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाले समुदायलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगायो र चार हप्तामै कोरोनामुक्त भएको घोषणा गर्न सफल भयो।
गत शनिबार ‘कोरोना रेडजोन’ नरैनापुर पुग्दा त्यहाँको स्थिति सामान्य भइसकेको थियो। १ सय १८ जना संक्रमित कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका थिए। अर्र्थात्, छोटो अवधिमै नरैनापुर कोरोनामुक्त भइसकेको थियो। कुनै बेला एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्न १७ वटासम्म क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको नरैनापुरमा पाँच वटा मात्र क्वारेन्टिन थिए, जहाँ डेढ सय जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। स्थानीय धानको ब्याड र आँप जोगाउने ध्याउन्नमा थिए। भारतबाट आउने क्रम जारी रहे पनि स्थानीयले भौतिक दूरी पालना गरेका थिएनन्। मास्क लगाएका थिएनन्। न त कोरोनाको उनीहरूलाई त्रास नै थियो। सबै कोरोनालाई जितेकोमा दंग देखिन्थे।
जेठ २ अघिसम्म नेपाल–भारत सीमानाकामा निकै कडाइ थियो। १४ दिन बाँकेको क्वारेन्टिनमा बसेका भारतीय नागरिक घर जान र भारतको नानपाराको क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीजमुनाहा नाकाबाट नेपालतिर आउन पाइरहेका थिएनन्। तर,बाँकेको कर्णाली उपमा पाएको दुर्गम नरैनापुर गाउँपालिकामा भने ३१ वैशाखमै राज्यको नीतिविपरीत भारतबाट सीमामा आएका ३ सय ३३ जनालाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखिसकेको थियो।
एकैपटक ठूलो संख्यामा आएकालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यतिबेलासम्म मुम्बईमा कोरोना संक्रमण भारतमै उच्च थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेले सबैको स्वाब संकलन गर्न नसक्ने भन्दै मुम्बईबाट आएका व्यक्तिको मात्र स्वाब संकलन गरेको थियो। ४५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा जेठ २ मा नरैनापुर–५, भगवानपुरको दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टिनमा रहेका छ जनासहित आठ जनामा पहिलो पटक नरैनापुुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यतिबेलासम्म नेपालगञ्जमा २५ जना संक्रमित भइसकेका थिए। उनीहरू सबैलाई खजुराको सुशील कोइराला क्यान्सर प्र्रखर अस्पतालकोे आइसोलेसन कक्षमा राखिएको थियो। यसकक्षमा थप व्यक्ति राख्न खाली ठाउँ थिएन। नरैनापुरका आठ जना संक्रमितलाई नै दाङको बेलझुण्डीस्थित आइसोलेसनमा राखियो। जेठ ३ गते आठ जना संक्रमितको कन्ट््याक्ट टे«सिङगरी एकैदिन नरैनापुरका २ सय ७३ जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको थियो। कोरोनाको रिपोर्ट नआउँदै जेठ ४ गते बिहान नरैनापुर–५, नयाँ बस्तीका २५ वर्षका युवाको दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको थियो। स्वाब लिएर पनि रिपोर्ट नआएकाले उनको शव २४ घण्टासम्म विद्यालयको चौरमै थियो। भोलिपल्ट बिहानसम्म नरैनापुरमा मृतकसहित ४७ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेको कुरा जिल्लामा गाइँगुँइ हल्ला चलिसकेको थियो। तर, अपराह्न ४ बजेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले युवाको मृत्यु कोरोनाबाट भएको पुष्टि गरेका थिए। उनी नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दोस्रो व्यक्ति भएका थिए। यसअघि सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाले कोरोनाबाट ज्यान गइसकेकी थिइन्। युवाको मृत्यसँगै नरैनापुरमा थप ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। राति साढे ८ बजेतिर मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी थप १२ जनामा कोरोना पुष्टि गरेका थिए। अपराह्न संक्रमण घोषणा गरेका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्न नपाउँदै नरैनापुरमा संक्रमित थपिएका थिए। यी संक्रमित २४ घण्टासम्म पनि क्वारेन्टिनमा अन्य व्यक्तिसँगै बसेका थिए। नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा स्थानीयले विरोध गरेका थिए। विरोध हुँदाहुँदै पनि संक्रमण पुष्टि भएको ७२ घण्टापछि संक्रमितलाई नेपालगञ्ज लगिएको थियो।
जेठ७ गते एक जना प्र्रहरी जवानसहित पाँच जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो। फाट्टफुट्ट संक्रमित फेला परिरहेकै थिए। जेठ १० मा फेरि नरैनापुरमा २७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो। नरैनापुरमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १ सय १४ पुगिसकेको थियो। त्यतिबेलासम्म नरैनापुर देशमै सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको स्थानीय तह भइसकेको थियो। देशभरमा पनि ५ सय ८४ जना मात्र संक्रमित थिए। देशका संक्रमितको १९.५२ प्रतिशत हिस्सा त नरैनापुरको मात्र थियो। प्रदेश ५ मा २ सय ७१ जना मात्र संक्रमित थिए। जबकि,बाँके जिल्लामा मात्र संक्रमितको संख्या १ सय ४३ थियो। प्रदेशको ४२ प्र्रतिशत हिस्सा त नरैनापुरले मात्र ओगटेको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको आठौँ दिनमा नरैैनापुरमा १ सय १४ संक्रमित फेला परेका थिए।
जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि पूर्वमा ४५ किलोमिटर टाढा राप्ती नदीपारिको विकट बघौडा क्षेत्र ‘कोरोना हटस्पट’कै कारण एक सातामै देश–विदेशमा परिचित भयो। संक्रमणको चौथो हप्तामै नरैनापुरफेरि चर्र्चामा आएको छ, कोरोनामुक्त स्थानीय तहका रूपमा। जेठ सुरु भएसँगै संक्रमणदेखिएको नरैनापुरमा जेठ मसान्तअघि नै कोरोना संक्रमण भएका १ सय १८ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
बाँकेको कोरोना रेडजोन नरैनापुर गाउँपालिकासंक्रमणको चार हप्तामै कोरोनामुक्त भयो। यहाँका पाँच वटा क्वारेन्टिनमा अझै डेढ सयभन्दा बढीलाई राखिएको छ। ४८ जनाको थ्रोट स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ।
कसरी भयो कोरोनामुक्त?
विकट नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं. १ सुइँयादेखि वडा नं. ६ गंगापुरसम्म कहीँकतै कोरोना रेडजोनको आभास नभएको स्थलगत रिपोर्टिङमा गएका विभिन्न सञ्चारगृहका पत्रकारले बताए। अधिकांश नागरिक मास्कबिना थिए। धेरै ठाउँमा समूहमा बसेका देखिन्थे। आँप बगैँचामा पनि हूलका हूल मान्छे भौतिक दूरी पालना नगरेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। साना–साना पसल खुलेका थिए। कुराकानी गरिएका सबैै व्यक्ति कोरोनाको त्रासबाट मुक्त भएको बताउँथे।
इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर मानबहादुर बीसी पनि स्थानीय बासिन्दा कोरोनाबाट डराउन छोडेको बताए। उनले कोरोना पोजिटिभ सबै निको भएर घर फर्केर नियमित काममा लागेको जानकारी दिए। ‘संक्रमितहरूकोरोना जितेर घर फर्केपछि नरैनापुरवासी उत्साहितर हर्षित भएका छन्,’ इन्स्पेक्टर बीसीले भने।
इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार नरैनापुर गाउँपालिकामा १ हजार ५४ जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। कुनै बेला नरैनापुरले १७ वटासम्म क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको थियो। अहिले पनि पाँच वटा क्वारेन्टिनमा १ सय ३४ जना छन्। क्वारेन्टिनमा बसेका ८ सय ८२ जनाको पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। प्रहरी, घरपरिवारका सदस्य, गाउँपालिका कर्मचारीसमेत गरी १ हजार ४४ जनाको पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। जुन जिल्लाको कुल कोरोना परीक्षणको झण्डै एकचौथाइ हिस्सा हो। ६ सय ८० जनाको आरडीटीबाट कोरोना परीक्षण गरियो। आरडीटी पोजिटिभ आएका व्यक्तिको पनि पीसीआर जाँच गरिएको थियो। संक्रमितहरू सबै क्वारेन्टिनमै रहेकाले कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्न पनि सजिलो भएको थियो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले नरैनापुरका क्वारेन्टिनमा रहेका सबै व्यक्ति र सम्पर्कमा रहेकाहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको बताए। ‘भारतबाट आउनेजति सबैलाई सशस्त्र प्रहरीले सीमाबाट सीधै क्वारेन्टिनमा ल्याएर राख्यो,’ उनले भने, ‘हामीले क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको कोरोना परीक्षण गरेका थियौँ। संक्रमितबाट समुदायमा कोरोना संक्रमण सर्न पाएन।नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ। एक जना संक्रमित घरमा र अर्को एक जना ससुराली गएका थिए। ती परिवारका सदस्य सबैको कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो। भारतबाट आउनेबित्तिकै क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गरेकै कारण कोरोना पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको हो।’
नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले हर्ष प्रकट गर्दै भने, ‘हामीले कोेरोनालाई जितेका छौँ।’नरैनापुरलाई कोरोनाबाटमुक्त गर्न डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अध्यक्ष शाहले भने, ‘कतैबाट सहयोग पाएनौँ। सडकको बजेट काटेर कोरोनामा खर्च गरेका हौँ। समुदायको विकासको बजेट हो। समुदायलाई कोरोनाबाट जोगाउन खर्च गर्‍यौँ।’